Soo bandhigida milkiilaha Viljaskolan
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa milkiilaha Viljaskolan.
Maamulaha guud ee shirkadda Utbildia AB
Patrik Nystedt wuxuu leeyahay khibrad ballaaran oo la shaqeynta maamulka shirkadaha xagga waxbarashada. Patrik wuxuu ka soo shaqeeyey maamule tayo leh Academedia, wuxuu kaloo maamule ka ahaa kooxda IRIS, kuxigeenka madaxa Praktiska gymnasierna iyo xubin gudiga Friskolornas Riksförbund. Patrik wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay wakaaladda waxbarashada ee qaranka, kormeerka dugsiyada iyo wasaaradda waxbarashada. Patrik wuxuu heystaa ballanqaad adag oo ku saabsan xaquuqda waxbarasho ee cunug kasta, iyadoon loo eegin sooyaalkiisa iyo meesha uu ku nool yahay.
Patrick Gladh wuxuu maamule uga soo shaqeeyey inta badan noloshiisii ​​qaangaarnimada. Tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuu maamule guul ka soo hooyay dugsiga Angeredsgymnasiet, halkaas oo uu ka qayb qaatay socodsiinta howlaha ballaaran ee horumarinta dugsiga, tusaale ahaan caqabadda Angereds. Qayb aad muhiim u ah shaqada Patrick ee Angered waxay ku saabsanayd wada shaqaynta dugsiga iyo bulshada deegaanka. Balanqaadkii Patrick ee ahaa in ilmo kasta xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho wanaagsan ayaa u horseeday inuu hadda ka bilaabo xaafadaha Viljaskolan iyo Viljaförskolan ee magaalada Angered.
Xubin ka tirsan guddiga isla markaana wada leh
Ole Salsten wuxuu aasaasey Praktiska gymnasieskolorna, taas oo horey u aheyd horudhac iyo tusaale u ah shaqooyinka maanta la barto. Hamiga Ole waa inuu ku lug yeesho nashaadaad bulshada wax cusub ugu keenaya oo isbeddel dhab ah ku keena carruurta iyo dhallinyarada.
Xubin kuxigeenka guddiga
Sara Nystedt waxay toban sano ee la soo dhaafay ka soo shaqeysay maamule iyo taakuleyn dhanka maamulka ah ee iskuulka xanaanada caruurta iyo dugsiga hoose ee degmada Kungsbacka. Waxay horay uga soo shaqeysay maamule iyada oo ka wakiil ah Hay'ada Qaranka ee Waxbarashada / Kormeeraha Dugsiyada. Maanta, Sara waxay u shaqeysaa sidii daaweeye xirfadeed oo shati leh waxayna ku dhameystireysaa mashruuc ka socda dugsiga hoose iyadoo ujeedadu tahay soo bandhigida hababka daaweynta shaqeynta. Guud ahaan, Sara waxay leedahay karti ballaadhan oo ku saabsan dugsiga barbaarinta iyo aagga iskuulka oo ay weheliso aqoonteeda ku-daweynta xirfadda.